Gbanwee nsogbu gị niile na Touchpad | Site na Linux
Ndewo, kedụ ka ndị enyi mere?
Jiri Archlinux (na ọtụtụ maara hehe), ọ na - eme na touchpad nke laptọọpụ m (Synaptics touchpad) na - arụ ọrụ nkịtị, ya bụ, ana m agafe mkpịsị aka m na mpaghara ahụ ma pointer na-agagharị, mana ọ naghị agagharị na ntanetị, ọbụnadị mgbe m ji mkpịsị aka wee pịa Mpaghara a nwere ike ịpị ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya.
Nke bụ eziokwu bụ na m ga-eji aka hazie touchpad, ma lee usoro 😉
1. Mepee ọnụ.
2. N'ime ya dee ihe ndị a:
Ọ ga-ajụ maka paswọọdụ gị, ha dee ya wee pịa [Tinye]
3. Na dọkụmentị ma ọ bụ faịlụ ederede a ga-emeghe, ha ga-apịrị nke a ihe m hapụrụ ha HERE.
4. Ozugbo ọ rapaara ebe ahụ, ha na-echekwa ya ma mechie ya.
5. Njikere, reboot na ị kwesịrị ịnwe touchpad n'ụzọ zuru ezu na-arụ ọrụ 😀
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ mgbanwe ọbụla, obi abụọ, ajụjụ ma ọ bụ ihe ọbụla, gwa m.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Gbanwee nsogbu gị niile na Touchpad
ezi dica, aga m ede na akwukwo m!
Ọ dị ezigbo mma, m ga-anwale ya. Daalụ.
Nke a bụ iji rụọ ọrụ multitouch nke mpe mpe akwa? Emeela m ka multitouch rụọ ọrụ ka ịpịgharịa, mana ịbaghị mbugharị. Mu onwem bukwa onye ArchLinux, obi di m uto maka nkesa a mgbe m ghasasiri 2 ubuntus na 1 debian haha ​​🙂
My touchpad enweghị nkwado ọtụtụ, ya bụ, nhazi a m tinyere na-enye gị ohere ịpịgharịa n'ụzọ abụọ:
- Swipị mkpịsị aka gị na ngalaba ma ọ bụ mpaghara ebe ahụ emetụtara maka ịpịgharị (n'akụkụ aka nri nke nwere obere ahịrị ...)
- Ọ bụrụ n’itinye mkpịsị aka 1 ebe, tinye mkpịsị aka abụọ ebe ọ bụla na touchpad wee were slide ha wee gbadaa, ị ga-ahụ otu o si agagharị.
Nke a ọ bụ ihe ị na-ekwu?
Kpọmkwem, ịpịgharị na mkpịsị aka 2 dị m ka ọ ga-eme ọtụtụ. Ejirila m mkpịsị aka abụọ rụọ ọrụ mpịakọta na aka nri nke touchpad, mana enwere m ohere iji mbugharị aka na mkpịsị aka abụọ n'ụdị iphone (nwalere na win2), mana na Linux enweghị m ike ịme ka ọ rụọ ọrụ. Ugbu a, m nọ na pc iji rụzie, ma mgbe ahụ, m ga-enye gị 2-synaptics.conf, nke dị ntakịrị karịa nke gị.
Aghọtara m gị, akwụkwọ mpịakọta ị kwuru bụ akwụkwọ mpịakọta okirikiri, nri? Na conf na m tinyere enwere ahịrị maka akwụkwọ mpịakọta a, naanị ị ga-eme ka ha ghara ime ya, malitegharịa ma gwa m ma ọ ga-arụ ọrụ maka gị.
HAHAHA ee ... nke m buru ibu HAHAHA ... Agbalịrị m ikpuchi ya niile HAHAHA
Akwa, Amaghị m ihe banyere akwụkwọ mpịakọta okirikiri, ugbu a, m megharịrị ya na m ga-agwa gị 🙂
My 10-synaptics.conf nwere naanị ihe ndị a:
Na nke ahụ, enwere m akwụkwọ mpịakọta n'akụkụ aka nri na ịme ọpịpị (echere m na akpọrọ ya otu ahụ) pịa.
Pịgharịa gaa na mkpịsị aka 2 enwere m ya rụọ ọrụ site na nhazi xfce.
Jisie ike, abughi m ọkachamara tere aka ya mana enwere m obi abụọ ebe a
Mpịakọta okirikiri anaghị arụ ọrụ maka m, ekwesịrị m ịkọwa eriri ahụ na-ekwu Option "CircularPad" "0"
Na m na-ahụ na i nwere nkwarụ kwụ akwụkwọ mpịakọta na mkpịsị aka 2, ọ na-arụ ọrụ n'otu oge ma ọ bụ enwere ike ịmekọrịta ha abụọ ọnụ?
Ah, eeh yehe hehe… 0 = agbanyụọla 😀
Ihe ntanetị na mkpịsị aka abụọ anaghị arụ ọrụ maka m, mana ọ nwere ike ịbụ n'ihi na mmetụ m aka anaghị ekwe ya ... enweghị echiche, etinye m ahịrị ndị ahụ na ọ ga-arụ ọrụ maka mmadụ 😉
Ọmịiko! N'okwu m ọ dịghị ihe gbanwere ...: S.
Anyị ga na-anwa xD
WTF… ịtụnanya, Agbalịrị m ya na ihe karịrị otu laptọọpụ ma ọ rụọ ọrụ 🙁
O gbaghara enyi m ..
Hache, amalitere m na Arch, na mbụ otu ihe ahụ mere m, agara m wiki ahụ wee gwa m na m kwesịrị ịwụnye xf86-input-synaptics, mgbe nke ahụ gasịrị, m ga-etinye ihe na-egosi na mado nke @ KZKG ^ Gaara <"Linux na ihe nile zuru oke.
Obi ụtọ ịmara na ọ baara gị uru 🙂
Ekele m na nnabata na blog 😉
Ajuju m chọrọ ịma ma ị nwere ike ịgbalite mbugharị ahụ n'ụzọ ọ bụla mgbe ị na-eme pilliscos na touchpad?
pilliscos? Ndo, aghọtaghị m gị 🙁
Ajụjụ nhazi ahụ rụụrụ m ọrụ nke ọma na debian m ebe ọ bụ na enweghị m ike ịme ka ịpịgharị na ụfọdụ ihe nchọgharị gbagoro na ala Amaghị m etu esi akpọ ya na teknụzụ. ị ga-enwe echiche ọ bụla otu esi edozi ya?
ekele na blog dị ezigbo mma
Nke a bụ n'ihi na nhazi ahụ ma ọ bụrụ na m cheta n'ụzọ ziri ezi, m debere ya ka mpịakọta ma ọ bụ ntụgharị ihu (site n'elu ruo ala na nke ọzọ) nwere mkpịsị aka abụọ. Tinye mkpịsị aka 2 na touchpad ma bugharịa ha elu na ala n'otu oge, gwa m ma ọ rụpụtara gị.
Ikwuru eziokwu, ọ na-arụ ọrụ site na mkpịsị aka abụọ, ịchetara otu esi agbanwe ya ka ọ bụrụ otu mkpịsị aka?
Na ahịrị 57 ebe ọ na - ekwu: Nhọrọ «VertTwoFingerScroll» «1»
Gbanwee 1 ahụ na 0 ma ị ga-emerịrị mkpịsị aka 2 aka.
Emerem ka m gbanwee ya dịka ị gwara m mana ọ naghị arụ ọrụ
You malitegharịrị kọmputa ahụ?
ọ bụrụ na m malitegharịa kọmputa ahụ
ọ bụ ihe dị egwu n'ihi na n'otu pc ahụ m nwere manjaro na otu nhazi a na touchpad na-arụ ọrụ nke ọma
Obinna 0 dijo
Ọ mara mma!
O zuru oke nye m na Debian Wheezy, daalụ nke ukwuu.
Ndewo, kedu ka ị mere, enyi, ị nwere ike ibudata koodu ahụ ọzọ ma ọ bụrụ na ọ bụghị oke nsogbu. daalụ maka onyinye niile ị na-enye
Ndewo, enwere ike inye m nhazi ahụ na njikọ ahụ anọkwaghị, biko daalụ.
Ọ bụrụ na ọ chọpụta m. Ma enwere m obere nsogbu. Igodo ENTER anaghị arụ ọrụ maka m. kedu ka m ga - esi mee?
Linux Mint Olivia (15) si na USB.
HP nx6110 laptọọpụ HP.
Zaghachi nye Marck
Ana m eji iwu a:
na ọ na-ejere m aka m na mpe mpe akwa 😀
M nwalere ya na Acer Aspire One D257
Faịlụ adịghịzi adị.
Ezi! Ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Daalụ maka ama =)
Ọ naghị arụrụ m ọrụ. Enweghi m ike ịpịgharịa na Kubuntu 14.04 (ebe ọ bụ n'ụzọ, faịlụ ahụ dị na ya bụ /usr/share/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ahụbeghị m ọzọ).
Ọzọkwa, mgbe m meghere KDE Systemsettings> Ngwaọrụ Ntinye> Touchpad, ana m enweta ozi na-ekwu "A naghị etinye onye ọkwọ ụgbọala Synaptics (ma ọ bụ na ejighị ya)", n'agbanyeghị na m nwere " xserver-xorg-ntinye-synaptics '. Amaghị m ihe m ga - eme ọzọ, nke bụ eziokwu bụ, touchpad na - arụ ọrụ maka m mana mpịgharị anaghị arụ (na Windows a na - eji mkpịsị aka abụọ mee ya na kọmputa a), na usoro nhazi usoro KDE na - eme ka m chee na ọ nwere ime ya, mana amaghi m otu esi edozi ya. Ọ bụla echiche gburugburu ebe a?
Jesus Guillermo Rivera dijo
ndewo, abum onye ohuru na Linux, achotara m ya nke ukwuu, agbanyeghi m acho imuta.
nyere aka biko, enwere m HP folio 13 lap, o nwere synaptics touchpad, mana ọ na - arụ ụdị nzuzu »ya bụ, ọ kaghị oke mgbe ọ bịara itinye mkpịsị aka m na ya, nke anaghị eme na windo, m ga - achọ ịmata ma ọ bụ n'ihi ndị ọkwọ ụgbọala ahụ, ma ọ bụrụ na ọ dị, olee otu m ga-esi wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka oke a na Linux mint cinnamon, ekele
Zaghachi jesus guillermo rivera
Ndewo, m ga-achọ ịma otu esi arụ ọrụ mpịakọta vetikal maka Ubuntu 12.04 lts «ọ na - eme na touchpad nke laptọọpụ m (Synaptics touchpad) na - arụ ọrụ nke ọma, ya bụ, ana m agafe mkpịsị aka m na mpaghara ahụ ma pointer na-agagharị, mana ọ naghị agagharị na ntanetị, ọbụnadị mgbe m pịa mkpịsị aka na mpaghara ọ pịa ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya »kpọmkwem otu ihe ahụ na-eme m. Achọrọ m ịma ma ị nwere ike inyere m aka, daalụ.
Zaghachi Jose Francisco
Na HP Pavilion 250 Laptọọpụ Kọmputa - G4 TPN-C125 - Debian 8 64bits jiri ihe Ivan Molina gosipụtara.
Daalụ nke ukwuu maka onyinye niile !!!!
PS: The ohere njikọ koodu agaghịkwa arụ ọrụ, ọ ga-abụ ezigbo bulite ya ọzọ 😉
Zaghachi Enrique Delgado
Ndewo, ị nwere ike bulite faịlụ ahụ ọzọ n'ihi na ọ naghị arụ ọrụ na enwere m nsogbu na touchpad ekele m
njikọ gị nke kwuru "ebe a" mebiri emebi, achọrọ m ozi a, ọ bụrụ na ị nwere ike imelite ya, m ga-enwe ekele maka ya, ekele gị nke ọma n'ọdịnihu
Zaghachi Yuri Lazo
Ndewo, enwere m nsogbu na òké touchpad m; Mgbe m mere ya site na ịpị A Key, Ọ naghị agagharị na nke a dị mgbagwoju anya maka ụfọdụ egwuregwu m si Lubuntu
Ezi mma. Ndo, ọ ga-amasị m ịrụkwa njehie a. M pịa na njikọ nke ihe m kwesiri ịpinye na ọ nweghị ihe ọ bụla.
Zaghachi Angel Rodriguez
HDP. ọ naghị arụ ọrụ ma ha bụ naanị mgbasa ozi.
Donye ka ị họọrọ: Ubuntu, Debian, ma ọ bụ ha abụọ?